Hoggaamiyayaasha Caalamka oo siyaabo kala duwan uga hadlay duqeyntii Syria – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Hoggaamiyayaasha Caalamka oo siyaabo kala duwan uga hadlay duqeyntii Syria
Madaxweynaha dalka Maraykanka, Donald Trump ayaa sheegay inay Diyaraadaha iyo Maraakiibta Dagaalka ee Maraykanka, Britain iyo Faransiiska sweerar wadajir ah ku qaadeen dalka Syria.
Weerarkaasi ayaa dhacay Waaberigii hore ee xilliga dalka Syria, waxaana duqeynta lala beegsaday Xarumo Milliteri iyo Bakhaaro lagu kaydiyo Hubka Kiimikada.
Hoggaamiyayaasha Caalamka ayaana souaanp la;a duwam uga hadlay Duqeyntaasi.
Hoggaamiyaha Kacaanka Islaamiga Iiraan, Aayatullaahi Cali Khamanii waxa uu cambaareeyey weerarkaasi, wuxuuna Madaxweynayaasha Maraykanka, Faransiiska iyo Ra’isul-wasaarada Britain ku tilmaamay Dembiilayaal Dagaal.
Madaxweynaha dalka Iiraan, Xasan Ruuxaani oo khadka Telefoonka kula hadlay dhigiisa dalka Syria Bashaar Al-asad waxa uu u muujiye inay dalak Syria gacan ka siinayaan La-dagaalanka Gardaradda Isbahaysiga Maraykanka iyo Argagixisadda
Wakaalladda Wararka Syria ee SANA ayaa sheegtay in laga hortagay inta badan Gantaalladii ay Dowladaha Reer Galbedka ku soo qaadeen Syria.
Wakaalladu waxay kaloo sheegtay inay Ciiddanka Dowladda Syria heleen Shaybaar ay Maleeshiyooyinka ka soo horjeeda Dowladda dalkaasi ku samaysan jirey Hubka Kiimikada.
Telefishinka AL-MANAAR ee taageera Ururka XISBULLAAHI Lubnaan ayaa sheegay in Weerarka Isbahaysiga Maraykanka xadgudub ku yahay Sharafta dadka Syria iyo Qaranimadda dalkaasi.
War-saxaafadeed ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibedda ee dalka Ciraaq ayaa lagu cambaareeyey Weerarkaasi, oo lagu tilmaamay mid khatar gelinaya Ammaanka Mandiqadda.
Sarkaal sare oo ka tirsan Milliteriga Raashiya, laguna magacaabo Jeneral Sergey Rudskoy ayaa sheegay inay Ciiddanka Difaaca Cirka ee Syria burburiyeen ugu yaraan 71 Gantaalo ay Isbahaysiga Maraykanka ku soo qaadeen dalka Syria.
Jeneral Sergey Rudskoy oo Suxufiyiinta kula hadlay magaalladda Mosko ayaa sheegay in ugu yaraan 103 Gantaal lagu soo duqeeyey bar-tilmaameedyo ku yaalla gudaha Syria.
Waxa uu intaasi ku daray inay Nidaamka Difaaca ee Syria hagaajiyeen 6-dii bilood ee la soo dhaafay.
Afhayeenadda Wasaaradda Arrimaha Dibedda ee Shiinaha waxay sheegtay in Weerarka Isbahaysiga Maraykanka ku qaadeen Syria uu xad-gudub ku yahay Xeerarka Caalamka.
Afhayeenada oo lagu magacaabo Hua Chunying, ayaa sheegtay in Xal Siyaasadeed ou keliya lagu xalin karo Xiisada dalka Syria,wxayna ku baaqday in Baraitaan madax-bannaan lagu sameeyo cidda mas’uulka ah weerarkii Hubka Kiimikadda ee dhawaan ka dhacay dalkaasi.
Afhayeenka Xisbiga haya Talada dalkaasi ee AK Party, Mahir Unal ayaa sheegay in Dowladiisa lagu soo wargeliyey Warka Duqeynta dalka Syria, ka hor intaysan Isbahaysiga Maraykanka duqeynin dalka Syria.
Wasaaradda Arrimaha Dibedda Turkiga ayaa sheegtay inay soo dhaweynayaan Duqeyntaasi
Hasal-qoraal oo ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibedda ee Sacuudiga ayaa lagu sheegay inay taageersan yihiin weerarka ay Isbahaysiga Maraykanka ku qaadeen dalka Syria.
“Waxan si buuxda u taageernay Hawlgalkaasi Milliteri ee lagu duqeeyey baraha Milliteri ee dalka Syria” ayaa lagu yiri Qoraalka.
Dowladda Baxrayn ayaa taageertay Duqeyntii lagu qaaday Syria, iyadoo ay Kumanaan Askar Maraykan ah saldhig ku leeyihiin dalka Baxrayn.
Ra’isul-wasaaraha dalka Holland, Mark Rutte waxa u usheegay inay Dowladiisa fahamsan tahay Tallaabadda Milliteri ee laga qaaday dalka Syria.
Waxa uu intaasi ku daaray inay Dembi weyn tahay isticmaalka Hubka Kiimikada, isla markaana aysan oggolaan Karin Beesha Calaamka.
Si kastaba ha ahaatee, Madaxtooyadda dalka Syria waxay soo bandhigay Muuqaal Video, iyadoo Madaxweyne Bashaar Alasad u so oshaqo tegay Xafiiskiisa Madaxtooyadda wax yar kadib, markii ay Isbahaysiga Maraykanka duqeeyeen qeybo ka mid ah
W.Q. Ustaad Nuradin
Dhageyso:-Wabiga Shabeelle oo Maanta fatahaad sameeyey(Warbixin)
Sawirro:-Hay’adaha u xilsaaran dib-u-eegista Dastuurka oo la kulmay Xildhibaanada Jubbaland